Diiwaangelinta Musharixiinta Madaxweynaha oo Berri bilaabaneysa iyo Codsi dib u dhigis... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Diiwaangelinta Musharixiinta Madaxweynaha oo Berri bilaabaneysa iyo Codsi dib u dhigis... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Diiwaangelinta Musharixiinta Madaxweynaha oo Berri bilaabaneysa iyo Codsi dib u dhigis…
Guddiga labada Aqal ee Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qorsheeyay in diiwaangelinta Musharixiinta u taagan xilka Madaxweynaha ay bilaabto 8-da May 2022 oo ku beegan Berri.
Jadwalka ay soo saareen Guddiga ayaa waxa ku cad in Doorashada madaxweynaha la qabanayo 15-ka May 2022 uu hadda toddobaad uun naga xigo, waxaana soo baxaya codsiyo kui saabsan in waqtiga kooban aanu ku filneyn musharixiin badan oo qaarkood hadda uun ku dhawaaqay nay tartamayaan.
Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Musharixiin kale ayaa laga soo xigtay inay raadinayaan waqti kooban oo dib loo dhigo xilliga Doorashada Madaxweynaha, waxaana arrintaa la qaba madaxda Bulshada rayidka oo ku dooday in waqtiga yar u saameyn xun ku yeelan karo Doorashada xilka ugu saeeya dalka.
Musharixiinta xilka madaxweynaha ee baraha bulsahda wareegaya ayaan kja yareyn 50 musharax, laakiin waxaa la filayaa in musharixiinta dhabta ha ee bixinaya lacagta is-diiwanagelinta ee dhan 40,000 Dollar ay gaari doonaan labaatameeyo.
Previous articleDhaqaalihii Somaliya ka heli jirtay Hay’ada IMF oo Bishan istaagaya iyo Codsi degdega oo loo diray
Next articleXOG: Afarta Musharax ee u gudbi kara Wareega labaad ee Doorashada Madaxweynaha